China Yakanakisa magineti egomo foni charger fekitori uye vanotengesa | Lantaisi
Yakanakisa magnetic gomo foni c ...
Yakarurama waya Yekuchaja S ...
15W Wireless Kuchaja Pad & ...
Yakanakisa magnetic gomo runhare charger
Ingoiisa pamhepo yemota, uye nekungoisa foni yako pairi, iyo magineti mota inokwira inogona kuibata yakasimba.
Kana iwe uchida kuenda nechidiki chidiki chinotaridzika chinotaridzika isina charger, iyo magnetic mount foni charger isarudzo yakanaka. Iyo Lantaisi CW12 Wireless inowanikwa mune shanduro nemhepo-vent, CD slot uye dashboard mota kukwira. Ndakaedza iyo air-vent vhezheni, iyo ine yekuvharira mashini pane yemhepo vent clip iyo inochengeta iyo charger gomo zvakachengeteka zvakanamatira kune iyo vent.
Kuti yako nhare isina waya ishande nemagineti mota kukwira, iwe ungangoda kesi ine imwe simbi yakavakirwa mukati mayo (iyo yandinayo) kana iwe unogona kunamatira imwe yeakasanganisirwa tetepa tambo-pamahwendefa esimbi kuseri kwefoni yako (tsvimbo iyo yakanangana nechepazasi saka haina kukanganisa nechairi yekuchaja matunhu ari pakati payo). Iwe unogona kutovhara iyo ndiro nefoni yako kesi, asi ita shuwa kuti kesi haina kunyanyisa kukora kana foni yako haizonamatira kune charger mount.
Iyo Lantaisi CW12 yemagetsi isina mota charger gomo inosanganisira mbiri USB mota charger iyo ine yakawedzera USB chiteshi yekuchaja yechipiri chishandiso. Iyo inosanganisirwa tambo ndeye USB-C, iyo yakakurumidza kuchaja kugona. Yangu iPhone 11 Pro yakaramba iri pajaja zvakachengeteka, asi avo vane mafoni mahombe saiyo iPhone 11 Pro Max uye Samsung Galaxy Note 10 vangangoita zvirinani kuenda neimwe yesarudzo dzemagetsi dzisina waya pamusoro.
Kune mavara akasiyana senge machena, matema uye akagadzirwa mavara kuti iwe uodha. Uye mhando iyi inonyanya kufarirwa uye yakapusa, inoyevedza.
Pashure: Yakamira isina waya Kuchaja Mira 10W - Yakanakisa Wireless Chaja Imire
Mota Shandisa Rudzi CW06
Mota Shandisa Type TS30